lundi, 06 juillet 2020 15:35
lundi, 06 juillet 2020 15:27
Toamasina: Mitohy ny asa famendrahana fanafody
Amin’ity herinandro ity, dia hafantoka amin’ny fanamafisana ny asa fanentanana ny asan’ny CRCO eto an-drenivohitra Betsimisaraka. Manampy an’izany, mitombo ny andraikitra ankinina amin’ny BMH na ny Bureau Municipal de l’Hygiène, izay misahana ny asa désinfection na famendrahana fanafody ireo toerana rehetra eto an-drenivohitry Toamasina. Ny fanafody VIROKIL moa no ampiasaina amin’izany asa famonoana ny Covid-19 izany.
Makadiry ny andraikitry ny BMH nanomboka tamin’ny fiantombohan’ny hamehana ara-pahasalamana, satria ity Birao ity no miantoka ny fahombiazan’ny asa famendrahana. Ny CRCO Atsinanana dia mankasitraka ny asa ataon'izy ireo ary manampy amin'ny fanatontosana izany asa izany.
Manentana ireo mponin'ny Toamasina ny CRCO Atsinanana, izay tarihan'ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, mba hanaja ny fepetra fiarovana amin'ity valanaretina ity, ary handray am-pitiavana ireo mpiasan'ny BMH ireo, no sady hanaraka ny toromarika.
lundi, 06 juillet 2020 15:00
Covid-19: Mihiboka Analamanga
Antananarivo Renivohitra an-tsary ny alatsinainy 06 jolay 2020.
lundi, 06 juillet 2020 14:35
Bakalôrea Teknika: fanadinana andrana ny aty amin’ny Faritra Betsiboka
Tanterahina ao amin’ny LTP Maevatanana, manomboka androany 06 jolay 2020, ny fanadinana andrana Bakalôrea Teknika.
Haharitra roa herinandro ny fanadinana, ka ny herinandro voalohany no hanatanterahana ireo taranja ankapobeny, ary ny herinandro faharoa kosa ny taranja teknika.
lundi, 06 juillet 2020 14:15
Toliara: Nitrangana haintrano tao amin’ny Domaines sy Topo
Nidonaka ny setroka narahina lelafo teo amin’ny trano misy ny biraon’ny Fananantany (Domaines) sy Fandrefesantany (Topographie) eto Toliara androany alatsinainy 6 jolay manodidina ny mitatao vovonana.
Akoson’aratra avy ao amin’ny tranon’ny mpiambina no voalaza fa niaingan’ny afo. Nalaky tonga ny mpamonjy voina ka voafehy aingana ny afo.
lundi, 06 juillet 2020 13:55
Mahazoarivo – Isandra: Maty voatifitra ilay mpimasy mpampandro dahalo
Lavon’ny Zandary ny mpimasy malaza fa mpamatsy ody gasy sy ody bala ireo dahalo, nampihorohoro tamin’iny Distrika Isandra sy Ikalamavony iny. Voasambotra tao Anterimihila Kaominina Mahazoarivo, Distrika Isandra ny 4 jolay 2020. Nahitana basy sy bala tao an-tranony rehefa nosavain’ny Zandary.
Nanararaotra nitsoaka ity mpimasy ity tamin’ny fotoana nitondrana azy hiazo ny brigadin’ny Zandary Mahazoarivo, ny andro rahateo efa nihamaizina. Nanao fampitandremana tamin’ny tifi-danitra ilay mpimasy ny Zandary fa tsy nampijanona azy, nitifitra ny mpitandro ny filaminana ka nahavoa sy namparatra ilay mpimasy. Maty noho ny fahaverezan-drà ity farany taorian’izay.
lundi, 06 juillet 2020 13:44
Fanompoa: Mifanaretsaka ny olona ato amin’ny Doany Andriamisara Mahajanga
Raikitra ! Tanterahina androany alatsinainy 6 jolay 2020 ny Fanompoa Be ato amin’ny Doany Andriamisara efa-dahy manan-kasina Tsararano Ambony – Mahajanga. Mifanaretsaka ny olona, nanomboka tamin’ny sabotsy nanaovana tsimandrimandry, mitohy hatramin’ity anio ity, na teo aza ny fameperana natao ny tsy maintsy hanajana ireo fepetra amin’izao hamehanara ara-pahasalamana izao, hisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid-19.
lundi, 06 juillet 2020 13:33
Cnaps: Mikatona anio sy rahampitso ny birao eto Analamanga
Ho fantatra amin’ny alarobia 8 jolay ny fandaminana vaovao.
lundi, 06 juillet 2020 13:28
Nandray fanapahan-kevitra ny eo anivon’ny Lapan’ny fitsarana Anosy fa hahemotra amin’ny fotoana tsy voafetra indray ny fiverenana amin’ny laoniny amin’ny fotoam-pitsarana izay nokasaina hosokafana androany alatsinainy 06 Jolay. Izany dia ho fiarovana ny ain’ireo izay manan-draharaha rehetra sy ireo mpiasa eo anivon’ny Lapan’ny fitsarana Anosy.
lundi, 06 juillet 2020 13:27
6 juillet: Journée Internationale du baiser.